Maamulka Hargeysa waxay burburiyeen 650 dhalo oo Khamriga ah meel fagaare ah. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Maamulka Hargeysa waxay burburiyeen 650 dhalo oo Khamriga ah meel fagaare ah.
Maamulka Hargeysa waxay burburiyeen 650 dhalo oo Khamriga ah meel fagaare ah.
Maxkamadda Gobolka Hargeysa, Xeer-ilaaliyaha Gobolka, iyo saraakiisha amniga, ayaa Arbacadii, baabi’iyay 650 dhalo khamri sharci-darro ah oo lagala qabtay magaalada Hargeysa. Maxkamaddu waxay xukuntay saddex tuhmane, kuwaas oo lagu qabtay iyagoo tahriibinaya khamri la mamnuucay inay galaan Hargeysa.
Taliyaha Bilayska Bariga Marodijeh, Axmed Saciid Maxamed, ayaa sheegay in booliiska degmada Macalin Harun, bariga magaalada Hargeysa, ay qabteen gaari ay wateen tobaneeyo kartoonno ah oo ay ka buuxaan 450 dhalo oo Dry GIN ah.
Saraakiil ka tirsan Maxkamadda Gobolka Hargeysa, Xafiiska Xeer Ilaaliyaha iyo Booliska ayaa ku daadiyay cabitaanada aalkolada ciidda isla markaana waxay burburiyeen dhalooyin ku yaal goobaha dadweynaha.
In kasta oo aan wali la qabin laba tuhmane, haddana Maxakamada Gobolka Hargeysa ayaa saddex qof ku xukuntay saddex sano oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan saddex milyan oo shilinka Somaliland ah mid kasta oo ka mid ah dambiyadaas. Maxkamaddu waxay kaloo ganaaxday baabuurkii waday alaabada sharci darada ahayd, illaa 5 boqolkiiba qiimaha hadda.
Isbeddellada dhowaa ee hoggaanka darteed, Booliska Somaliland waxay kordhiyeen dagaalka ay kula jiraan tahriibinta maandooriyaha sharci-darrada ah sida khamriga, qamadiga iyo daroogada meth-ka waxayna xireen shaqsiyaad badan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland.
Taliska cusub ee Booliska ayaa ka codsaday shacabka Somaliland inay ka fogaadaan ganacsiga sharci darrada ah isagoo ku booriyay inay soo sheegaan kiisaska shaqsiyaadka ka ganacsada daroogada.
Somaliland bulshada dagto boqolkiiba boqol waa Muslim ah oo leh qawaaniin adag oo ku saabsan isticmaalka aalkolada. Dhammaan noocyada aalkolka waa ka mamnuuc marka loo eego qawaaniinta Somaliland iyo u dhiganta shareecada Islaamka.
Cudur dad badan ay u dhinteen oo ka dilaacay Dalka Shiinaha
Duqeyn lagu dilay dad badan oo ka dhacday Dalka Suuriya